ramkrishna February 17, 2021	कुन दिशामा सिरानी लगाएर सुत्दा के हुन्छ ? एकदम ख्याल राख्नुहोस
घरमा तपाई कुन दिशातिर सिरान लगाएर सुत्नुहुन्छ ? मानिसको सुताई उसको स्वाथ्यसंग सम्वन्धित हुन्छ । एकदम ख्याल राख्नुहोस कुन दिशा सिरान लगाएर सुत्नु सही हुन्छ भनेर । हामी जव दिनभरी काम गरेर थाक्छौं । शरीरको उर्जा कम हुन्छ । शरीरमा उर्जा कम भएपछि आराम जरुरी हुन्छ । शरीरको आरामको लागि सुत्नु अत्यावश्यक छ । तर सुताइका पनि नियम छन् । त्यस्तै सुत्दा जहिले पनि भोजन गरेको २ घण्टाभन्दा पछि मात्र सुत्नुका साथै दिशा पिसाव गरेर सुत्नुपर्छ । सुत्ने समयमा जहिले पनि सकारात्मक सोंच राख्नुपर्छ । हात खुट्टा धोएर राम्रोसँग पुछेर मात्र सुत्नुपर्छ । शयन कक्षमा भगवानका चित्र हुनु राम्रो मानिन्छ । सूर्योदय भन्दा अघि नै उठिसक्नुपर्छ । हेरौ कुन दिशातिर सिरान गर्दा राम्रो हुन्छ ।
Previous Previous post: नेपालको सेयर बजार जानी राख्नु पर्ने अति उपयोगी सामान्य ज्ञान
Next Next post: कम्प्युटर भाइरसबाट विभिन्न तरिकाले बच्न सकिन्छ